Nagu saabsan - Jinan Zhancheng Qalabaynta Qalabka Co., Ltd.
Ruux curinta, wada shaqeynta iyo tayada ayaa dhaqaajisa howlaheena maalinlaha ah. Kooxdayada hibada u leh waxay isu yimaadaan si ay u horumariyaan una gaarsiiyaan wax soo saarka suuq geynta iyo teknoolojiyada iyagoo siinaya adeeg joogto ah oo aad u wanaagsan macaamiisheenna adduunka. Tani waxay ka dhigeysaa ZC LASER goob shaqo oo xiiso leh.
Jinan Zhancheng Qalabaynta Qalabka Co., Ltd waxaa la aasaasay 2013. Isku dhafan tiknoolajiyada ugu dambeysa ee gudaha iyo yurubiyanka, waxay isu soo wada ururiyeen shaqaale farsamo iyo maamul shirkadeed oo caan ku ah leysarka laser.
Waxaan soo saarnay xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee ugu dambeysay ee mashiinka calaamadeynta laser, mashiinka alxanka laser, mashiinka goynta laser iwm. Qalabkeena wuxuu leeyahay astaamaha muuqaalka quruxda badan, waxqabadka xasiloon, cimriga dheer, saxnaanta waxqabadka sare, qiimaha tartanka. Illaa iyo hadda, shirkadeennu waxay ku guuleysatay in ka badan 50% iibka sannadlaha ah ee kordha, taas oo ah heerka ugu sarreeya dalka.
Dadku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan gaarista himilooyinkayaga. Waxaan ku dadaalnaa inaan u adeegsano xirfadaha iyo aqoonta shaqaalaheena faa iidada ugu weyn ee suurtogalka ah ee ururka. Iskaashiyada iyo iskaashiga aan la leenahay shirkadaha kale ayaa lafdhabar u ah ficilkeena.
Ujeedada ZC LASER waa soo saarida mashiinno tayo sare leh iyo mashiinno qaas ah oo teknolojiyadda leysarka loogu talagalay warshadaha qiimo macquul ah.Wareynta teknolojiyadda laser-ka ayaa si wax ku ool ah kor ugu qaadi doonta casriyeynta wax soo saarka, keydinta tamarta, ilaalinta deegaanka iyo warshadaha kale ee soo baxaya, iyo la kulmo baahida macaamiisha ee alaab iyo adeegyo tayo sare leh. Waxaan dhidibada u aasanay maareyn tayo leh iyo nidaamka adeegga iibka kadib. Waxaan ku siin karnaa dhammaan noocyada kala duwan ee taageerada farsamada iyo adeegga iibka kadib ee macaamiisha, waxaanan bixin karnaa xirmo dhammaystiran oo xalka farsamaynta laser-ka ah ee macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
Shirkaddayadu waxay had iyo jeer u hoggaansameysaa "u janjeedha suuqa, Badbaadinta Tayada, Adeegga loogu talagalay horumarinta, Xirfadlaha '' falsafadda ganacsiga, iyo si firfircoon u ballaadhinta suuqyada gudaha iyo dibaddaba.